Home Wararka RW Ku Xigeenka iyo Wasiirka A. Dibadda oo bilaabay beecinta sharafta Umadda...
RW Ku Xigeenka iyo Wasiirka A. Dibadda oo bilaabay beecinta sharafta Umadda Soomaaliyeed (Fadeexad, Cadeymo)
Iyada oo ay dowlada Soomaaliya ku jirto xaalad siyaasadeed oo dhib daban marka loo eego xiriirka Arimaha Dibadda gaar ahaan waxa culeys ka heystaa:
Iyada oo uu xunyahay xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeya wadamadda dariska la ah oo ay ku jiraan Jabuuti, Kenya and Uganda
Iyada oo Korontadii Wasaarada Arimaha Dibadda ay dansan tahay mudo asbuuc ah ka dib markii biilka lagu lahaa Wasaaradda la awoodi waayay in la bixiyo
Iyada oo Safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay caalanka dublamaasiyiinta ka shaqeeyaa ayan mushaar qaadanin in ka badan sideed bilood
ayaa Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenkii Dalka Mahdi Mohamed Guled iyo Wasiirkii Arimaha Dibada Axmad Ciise Cawad waxaa ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u heli lahaayeen casuumaado wadamo kale uga yimaado taasi oo u suuragalinaysa in ay safraan.
Wasiirka Wasaaradda Arimaha Dibadad iyo Ra’iisal Wasaare ku xigeenka waxa ay qoraalo kala duwan u direen wadamo badan oo caalamka ka tirsan kuwaas oo aan xiriir hoose iyo mid Istaraatijiyo dhaxeeynin dowlada Soomaaliya xiligaan.
Waxaa ay u muuqataa in magacii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed loo isticmaalayo dano iyo safaro la doonayo in lagu xalaaleyso lacagta laga soo ururiyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqadishu.
Sida aad ku aragtaan nuqulka hoos ku qoran, Wasiirka Wsaaradda Arimaha Dibadda ee Soomaaliya Axmad Ciise Cawad ayaa waxa uu qoraal rasmi ah u qoray dowladda Serbia isaga oo codsanaayo in Ra’iisal Wasaare Ku xigeenka Mahdi Mohamed Guleduu safar ku tagao dalkaas. Wasiirka ayaa qoraalkiisa ku sheegay in safarkaa ujeedadiisu tahay in dib loo soo nooleeyo xiririkii taariikheed ee ka dhaxeeyay labada umadooda.
Qoraalka Wasiirka qoray ayaa ah mid ka been shagaya xiriirka labada umadood, Soomaliya waxaa ay xiriir kala dhaxeeyay Dowladii la oran jiray Yugoslavia oo hada kala jajabtay, Serbia wax xiriir ah oo horay noogala dhaxeeyay ma jirin xiliga hadda aan ku jirnana ma jiro.
Ujeedad rasmiha ee safarkaan ayaa ah in lacag lagu cuno safarka. RW Ku Xigeenka Mahdi ayaa safarkastaa oo uu safro waxa uu horay u qataan lacag lagu sheegay gacan qabso oo kor u dhaafaysa $30,000 lacagtaas ayaanan loo istcimaalin hoteelo ama raashin toona madaama hoteelada ay bixiyaan dowlada martida loo yahay, gaar ahaan marka uu safarkaagu yahay safar gaar ah oo lagu martiqaad ah.
Dowlada Farmaajo ayaa waxa ay soo gaartay xiligaan in ay hogaanka dowlada ay u kala dhuuntaan safaro iyo shirar aan dan ugu jirin umadda Soomaaliyeed si lacag loogu cuno isl markaana magac loogu sameeysto.
Halkaan ka aqriso nuqul ka mida nuqulada ay qoreen: